မြန်မာ, 12 ဇူလိုင် 2017 page pageno
12 ဇူလိုင် 2017 ဗုဒ္ဓဟူး
10 ဇူလိုင်၊ 2017
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေး လူကယ်ပြန်ဝန်ကြီးနဲ့ မေးမြန်းချက်
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာ တင်းကျပ်တဲ့နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားဥပဒေသစ်ပြဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတချို့ မြန်မာနိုင်ငံကို တဖွဲဖွဲပြန်လာတာမှာတော့ ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီက မဲဆောက်နယ်စပ်ဂိတ်ကနေ ပြန်လာတဲ့အရေအတွက်ကကို သုံးသောင်းလောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms.Yanghee Lee ဟာ သူမရဲ့ ၆ ကြိမ်မြောက် မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်ကို ဒီကနေ့မှာ စတင်လိုက်ပါပြီ။ ၁၂ ရက်တာ ကြာမြင့်မယ့် ဒီခရီးစဉ်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်နဲ့ အထူးစိးပွားရေးဇုန်တို့ကို လည်း သွားရောက်ဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့်လို့ လုံခြုံရေး အခြေအနေကြောင့် တစ်ချို့နေရာတွေ သွားရောက်ခွင့်ကိုတော့ ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောဒေသတွင်း လုံခြုံရေးတာဝန်ယူရသူတွေအတွက်ကတော့ အခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့ မောင်တော ဒေသ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူတွေက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့ အကြပ်အတည်း
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်ပြဋ္ဌန်းပြီး ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အလုပ်သမားတွေရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တရားဝင် ပြန်လည် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် အလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ AFP သတင်းကို အခြေခံပြီး မခင်ဖြူထွေး တင်ပြထားပါတယ်။
သတင်းအကျဉ်းချုပ် ၀၇. ၁၀. ၂၀၁၇
ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတဲ့ ၆၆ (ဃ) မှာ ဘာတွေ ထူးခြား ပြောင်းလဲမလဲ
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်မယ့် ဥပဒေကြမ်းကို အများပြည်သူ သိရှိ လေ့လာ အကြံပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာမှု ထိန်းသိမ်းမယ့် လူငယ် ဒီဇိုင်းပညာရှင်များ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေ တိုးပွားလာနေချိန်မှာ မြန်မာ့လူငယ်တန်း ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေကလည်း ပြည်တွင်းဖြစ် အထည်တွေနဲ့ မြန်မာဆန်တဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကို ဖန်တီးတီထွင် ထုတ်လုပ်လာနေကြပါတယ်။
09 ဇူလိုင်၊ 2017
မြန်မာဒုက္ခသည်တွေပြန်ခေါ်ရေး ကုလ ဖိအားပေးဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ်တိုက်တွန်း
ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး ပြန်ခေါ်ရေး မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ လေးလေးနက်နက် ဆောင်ရွက်လာစေဖို့ ကုလသမဂ္ဂဘက်က တွန်းအားပေးပါလို့ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မာမွတ် အလီက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့ ပုဒ်မ ၆၆ဃ အပါအဝင် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းကို ဒီကနေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကတဆင့် အများပြည်သူသိရှိလေ့လာနိုင်အောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းကပြန်တဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား ၃သောင်းကျော်ရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်သမားဥပဒေသစ် ပြဌာန်းပြီးကတည်းကဆိုရင် တာ့ခ်ခရိုင်၊ မဲဆောက် နယ်စပ်စစ်ဆေးရေး ဂိတ်ကနေ ပြန်ပို့ လိုက်တဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအရေ အတွက် ၃ သောင်းကျော် ရှိသွားပြီလို့ ထိုင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အကြီးတန်း အရာရှိ တဦးကို ကိုးကားပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် The Nation သတင်းစာမှာ ဒီနေ့ရေးထား ပါတယ်။
ယန်ဟီးလီအပေါ် မြန်မာအစိုးရသဘောထား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ဝေဖန်
ရှေ့သီတင်းပတ်အတွင်း လာရောက်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီလီရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ သတိပေး ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ နယူးရောက် အခြေစိုက် HRW လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ကြီးက ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကာချုပ် ၈ ရက်ကြာ အိန္ဒိယခရီးစဉ် စတင်
“ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် Narendra Modi ၊ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး Arun Jaitley ၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး Ajit Doval တို့နဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
တောင်ကိုရီးယား Me Too လှုပ်ရှားမှု
တရားဝင်မကြေညာတဲ့ အီရန် နျူကလီးယားစက်ရုံမှာ ယူရေနီယံ အထောက်အထားတွေ့ရှိ
Donald Trump နဲ့ တူရကီသမ္မတတို့ ဘာဆွေးနွေးကြမလဲ
ချင်းပြည်နယ်အမတ် ပြန်လွှတ်ဖို့ မြန်မာစစ်တပ် နယ်မြေရှင်းလင်းနေ